Global Voices teny Malagasy » Afomanga: Ahoana ny fankalazan’i Japana ny fahavaratra miaraka amin’ny ‘hanabi’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Aogositra 2018 11:55 GMT 1	 · Mpanoratra Hitomi Yoshida Nandika Miranah
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Mediam-bahoaka, Saripika, Vaovao Tsara, Zavakanto & Kolontsaina
Heverina fa nampidirin'ireo mpivarotra Holandey voalohany tao Japana  efa ho 500 taona lasa ny afomanga. Fetibe afomanga an-jatony no tontosaina androany ao amin'ireo vondrom-piarahamonina madinika sy lehibe manerana an'i Japana, amin'ny ankapobeny atao eny amin'ny moron-drenirano na tora-pasika. Rehefa hifarana ny volana Aogositra dia tonga ny fahavaratra, ity topimaso tamin'ireo fetibe “hanabi” tsy hadinoina indrindra ao Japana tao anatin'ny roa volana lasa:
Nomena endrika avy amin'ny tanàna nentin-drazana Holandey, zaridaina sy toeram-pitsangatsanganana malaza ao Nagasaki, ao amin'ny nosin'i Kyushi ny Huis Ten Bosch.  Midadasika kokoa noho ny Toeram-pitsangatsanganana Disney Tokyo , Huis Ten Bosch no vala lehibe indrindra ao Japana, afahan'ireo mpitsidika mankafy afomanga fahavaratra no sady milona anaty dobo filomanosana lehibe.
Amin'ny fahavaratra, ny ‘hanabi’ ao amin'ny Huis Ten Bosch no ahitana fampiratiana ataon'ireo mpandresy tamin'ny fifaninanana afomanga malaza tontosaina isan-taona ao amin'ny zaridainan'ny Amboara Erantany Hanabi .
Miorina eo akaikin'ny tanàna seranan-tsambo ao Kobe, andrefan'i Japana, nankalaza ny tsingerintaonany faha-efatra tamin'ity taona ity ny Karinavaly Fahavaratra Ashiya  ahitana fampisehoana ‘hanabi’ tsy manam-paharoa.
Ny solosaina no mandrindra ny mozika rehetra sy ny afomanga rehetra amin'ity fampisehoana ity. Tamin'ny tsingerintaona tamin'ity taona ity, nanao fampisehoana miaraka amin'ny afomanga ilay mpitendry piano jazz malaza Takashi Matsunaga .
Mitranga eo anelanelan'ny volana Jiona sy Jolay isan-taona ny Fetibe Tenjin  efa naharitra arivo taona, natokana ho an'i Sugawara Michizane (ny andriamanitry ny vatsim-pianarana sy ny fianarana), ary ahitana lanonana isan-karazany. Anisan'ny fetibe faran'izay malaza indrindra any Japana, marobe ireo olona mankany amin'ny renirano Okawa ao Osaka mba hijery fampisehoana afomanga ao Hommiya ny 25 Jolay, araka ny hita etsy ambony.
Matetika manondro ny ‘uchiage hanabi’ (打 ち 上 げ 花火, “afomanga” ara-bakiteny) ny afomanga alefa amin'ny alina eny an-danitra ary mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny kolontsaina Japoney, miseho matetika amin'ny hira. Ny horonantsarimiaina 2017 ”Fireworks ‘ (打ち上げ花火 、下から見るか? 横から見るか? Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka?) dia mampiseho ny fivangongoan'ny afomanga amin'ny kolontsaina Japoney:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/24/125119/
 fahaiza-manaony ara-javakanto : http://thechromologist.com/art-japanese-fireworks/
 nampidirin'ireo mpivarotra Holandey voalohany tao Japana: https://www.researchonline.mq.edu.au/vital/access/services/Download/mq:9447/DS01?view=true
 Fetibe afomanga an-jatony : https://www.japan-guide.com/e/e2267.html
 Huis Ten Bosch.: https://en.wikipedia.org/wiki/Huis_Ten_Bosch_(theme_park)
 Toeram-pitsangatsanganana Disney Tokyo: https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Disney_Resort
 Amboara Erantany Hanabi: https://digjapan.travel/en/spot/id=10994
 Karinavaly Fahavaratra Ashiya: http://www.nihon-kankou.or.jp.e.wp.hp.transer.com/detail/28206ba2210127318
 Fetibe Tenjin: https://us.jnto.go.jp/blog/tenjin-matsuri-festival-of-the-gods/